Sir Muhiim ah Oo Dumarka ay ku soo jiidan karaan Ragga Xiliga …(Akhriso) - iftineducation.com
iftineducation.com – waxaa jira waxyaabo badan oo aay Ruuxa Dumarka aay Ninkeeda ku soo Jiidan karto si aay cayaar wanaagsan u Dareynsiiso, waxaa ugu wanaagsan in aay si wanaagsan u salaanto marka uu Guriga yimaado, si wanaagsana aay ula hadasho, Salaan la’aanta iyo hadalka xun wuxuu sababi karaa in Cayaarta raga ee Sariirta aay hoos u dhacdo. ama in uu Xaas kale kula Guursado.
Gabadha waa in uu Ninkeeda ka dareemaa in aay Dalbayso Cayaarta Sariirta, maxaa yeelay Gabdho badan ma oga dalbaka in uu Ninkeeda ka garto waxaay aaminayaan in aay tahay wax ceeb ah, Asxaabta Nabigeena Muxamed (SCW) marka la aamanayo xaasaskooda waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid aheyd in Gabadha aay Maro gaaban oo fudud haddii uu Ninkeeda damco in uu u galmoodo aanan dhibeynin in uu ka siibo ayay xiran jirtay.
Gabadha waxaa laga doonayaa in aay u fahanto galmada in aay tahay mid nolosha ka mid ah, oo danta laga gaarayo aay tahay mid aay labada is qabaa aay wada gaarayaan, ninkaada waxaa wanaagsan in aadan u muujinin in uu isaga aay Faa’iido ugu jirto Cayaarta Sariirta oo aad adiga ugu danaynayso laakiin waa in aad u ragtaa adiga Ruuxaaga in aad u baahantahay oo aad ka faa’iideyso.
Gabadha wax badan waa in aay jishaa waqtiga galmada ama raaxada lagu gudo jiro oo maalinba filim cusub aay u jisho oo wax cusub uu ninkeeda ku arkaa taas waxaay keeneysaa in uu u xiiso ninkaaga Galmada.
waxaa wanaagsan marka aay dhamaato galmada in gabadha aay dareensiiso Ninkeeda in uu shaqo wanaagsan qabtay oo aay u duceyso, si wanaagsan ayaa iigu raaxeysay iwm. aay kula hadasho aaynana marna dareensiinin in uu qalad sameeyay intii lagu guda jiray galmada haddii aay doonayso in aay wax ka saxdo waxaa wanaagsan waqti kale in aay u sheegto ayadoo xikmad adeegsanayso Ninka oo Haweynaydiisa marwalba oo shaqada dhamaado dareensiisaa in uu shaqo waxan qabanin waxaay keentaa in uu Xubintiisa kici waydo.
QISO JACEYL AH:- Annigoo Daawanaya musasal aan Aad u jecelahay,oo ay Hareerahayga ku Xeerran yihiin…